I-147 powder (1146963-51-0) | neuroprotective kunye neurotrophic compound
/ iimveliso / I-Nootropics powder / J 147 powder
SKU: 1146963-51-0. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kulawulo lweJ 147 powder (1146963-51-0), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
J147 powder Kwaqala ukuphuhliswa kwi-2011, kwaye abaphandi baye baqhuba uphando oluthile olubonisa ukuba lunokuphelisa ukulahlekelwa kweememori kunye nokuphuza okanye ukuguqula i-Alzheimer kwimigundane. Kodwa kude kube lolu cwaningo, abazange bazi ukuba lisebenza njani kwiiseli. Baye bakwazi ukubonisa ukuba i powder J147 isebenza ngokusetyenziswa kwe-ATP, iprotheni kwimithachondria kunye nomthombo wamandla omzimba womzimba. Xa i-powder J147 yayikho, i-neurons yayikhuselekiswe kwizinto ezinobungozi ezinxulumene nokuguga. Uvavanyo olongezelelweyo lubonise ukuba i-J147 powder yandisa amanqanaba e-ATP kwaye ikhuthaza imitochondria enempilo,
J 147 powder ividiyo
I-Raw J 147 powder ezisisiseko
igama: J 147 powder
I-molecular Formula: C18H17F3N2O2
Isisindo somzimba: 350.3349896
Isitoreji sokugcina: 4 ° C
umbala: I-White okanye i-powder emhlophe
I-Raw J 147 powder ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nomjikelezo owongezelelweyo
J 147 (1146963-51-0) Umlinganiselo wokusebenzisa
Ukusebenzisa isicatshulwa sokufumanisa izilwanyana zesifo se-Alzheimer (AD) esisekelwe kwiipathologi ezininzi zokuguga, saqaphela isakhi esinobuchule kunye nokusebenza kakuhle kwimemori ye-rodent kunye neemodeli zezilwanyana ze-AD. Ukususela kule ngqungquthela, i-J-147 powder, i-phenyl hydrazide, kukho inkxalabo yokuba iyakwazi ukuxiliswa kwamamine / ama-hydrazines ayenokubangela i-carcinogenic. Ukuphonononga oku, kungenzeka sihlolisise i-metabolites ye-J 147 powder kwi-microsomes yabantu kunye ne mouse kunye ne-plasm mouse. Kuboniswa ukuba i-J-147 (1146963-51-0) ipowder ayinakulinganiswa kunye nama-amines adibeneyo okanye i-hydrazines, ukuba i-scaffold isisigxina kakhulu, kwaye i-metabolites ene-oxidative nayo i-neuroprotective. Kugqitywa ukuba i-metabolites enkulu ye-J 147 (1146963-51-0) ipowder inokufaka isandla kwimisebenzi yayo yezilwanyana kwizilwanyana.
I-147, ephuma kwi-curry engxenyeni ye-curry, ine-toxicity ephantsi kwaye ibuyisela umonakalo kwi-neurons ehambelana ne-Alzheimer's.
J 147 (1146963-51-0) yiprotheni ye-mitochondrial ebizwa ngokuba yi-ATP synthase, ngokukodwa i-ATP5A, i-subunit yale protein. I-ATP synthase ibandakanyeka kwisizukulwana se-mitochondrial se-ATP, ezisebenzisa iiseli zamandla.
Abaphandi babonisa ukuba ngokunciphisa umsebenzi we-ATP synthase, bakwazi ukukhusela iiseli ze-neuronal ezininzi zetyhefu ezinxulumene nokuguga kwengqondo. Esinye isizathu sokuba le mphulo ye-neuroprotective icingelwa ukuba yindlalifa ye-excitotoxicity kumonakalo we-cell neuronal.
I-excitotoxicity yinkqubo ye-pathological ye-neurons eyonakaliswe ngayo kwaye ibulawe yi-overptivation of receptors ye-glutamate ye-neurotransmitter ye-excitatory. Cinga ngento efana nomtshini wokukhanya ovuliwe kwaye ucime ngokukhawuleza kangangokuthi iqukumbele ibangela ukuba i-bulb light iqhume.
Kungekudala, indima ye-ATP synthase inhibition ye-neuroprotection against umonakalo we-excitotoxic iboniswe kwisifundo se mouse (4]. Uphando lwesibini lubonisa ukuba imifanekiso yamagundane ebonisa uhlobo lomntu we-ATPase engummiselo we-1 (hIF1), obangela ukukhuseleka okuqhubekayo kwe-ATP synthase, bebanokuphelela ekufeni kwe-neuronal emva kokulimala kwe-excitotoxic. Olu datha luhambelana nale ntsha ye-J 147 yophando lwepowder, apho ukwanda kwe-IF1 kwimicebe kuncitshiswe umsebenzi we-ATP synthase (ngokukodwa i-ATP5A) kwaye yayingenayo i-neuroprotective.
Isilumkiso kwi-Raw J 147 powder
Iinkcukacha eziboniswe apha zibonisa ukuba i-J-147 powder inokukwazi ukuhlangula ukulahlekelwa kwengqondo xa ilawulwa kwisithuba esikude kwisifo. Ikhono le-J-147 ipowder ukuphucula imemori kwiimichiza ze-AD ezindala zihambelana nokufakelwa kwayo kweengxaki ze-NGF (i-nerve growth factor) kunye ne-BDNF (ubuchopho obuthatha i-neurotrophic factor) kwakunye neeprotheni ezininzi eziphendulayo ze-BDNF ezibalulekileyo ekufundeni kunye nememori. Ukufanisa phakathi kwe-J-147 (1146963-51-0) ipowder kunye neeferepezil kwimodeli ye-scopolamine ibonise ukuba ngelixa zombini izixhobo zifaniswa nokuhlangula imemori yesikhashana, i-J-147 powder yayiphambili ekuhlanguleni imemori yendawo kunye nokudibanisa kwabo babini basebenza okusemgangathweni kwimemori yenkcazo kunye nekerubhi.
Isifo se-Alzheimer sisifo sengqondo esiqhubekayo, esandula kubalwa njengesihlandlo sesithathu sokufa e-United States kwaye sichaphazela izigidi ezingaphezu kwezigidi zaseMerika. Kwakhona kuyona nto ibangela ukugula komzimba kubantu abadala, ngokutsho kweeNational Institutes of Health. Nangona ezininzi iziyobisi ziphuhlisiwe kwixesha elidlulileyo le-20 ekujoliswe kuyo i-amyloid plaque kwiingqondo (okuyiyona nto ibonakalisa isifo), bambalwa baye bafakazela ngokusebenzayo kwiklinikhi.
Ngexesha elidlulileyo i-20 iminyaka ijolise i-amyloid plaque kwiingqondo (okuyiyona nto ibonakalisa isifo), akukho nanye ibonakalise ukuba isebenzayo kwikliniki, "kusho uSchubert, umbhali ophezulu wolu cwaningo.
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, u-Schubert kunye nabalingane bakhe baqalisa ukunyanga kweso sifo ukusuka kwinqanaba elitsha. Esikhundleni sokujolisa kwi-amyloid, ibhabhi inqume ukuba ibe yinto enobungozi obudala bokugula. Ukusebenzisa izikrini ezisekelwe kwiseli ezinxulumene nobutshongo beengqondo ezindala ubudala, zidibanisa i-X XUMUMX (147-1146963-51) ipowder.
Ngaphambili, iqela lafumanisa ukuba i-J-147 powder inokuthintela kwaye ibuye ibuye ibuye ibuye ilahlekelwe imemori yokulahleka kunye ne-Alzheimer's pathology kwiigundane ezine-version of inherited form of Alzheimer's, imodeli esele isetyenziswa kakhulu. Nangona kunjalo, le fomu yesifo iquka kuphela iipesenti ze-1 ze-Alzheimers. Kuwo wonke umntu, ukuguga kungumngcipheko omkhulu, uthi uSchubert. Eli qela lafuna ukuphonononga imiphumo yesigqirha sogqirha kwiintlobo zeegundana ezithatha ixesha ngokukhawuleza kwaye zifumane inguqu yokudemeka kwengqondo ehambelana ngokugqithiseleyo ngokungafani nengxaki yomntu.
I-Raw J 147 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-X XUMUMX powder kwi-AASraw
I-147 Raw Powder Recipes:
I-J-147 Powder IsiGqeba sokuThengisa nokuThengisa okupheleleyo
Uvavanyo lweMithi ye-J147 (1146963-51-0) I-Alzheimer's Aging
I-Noopept (GVS-111) ipowder
I-Sunifiram (DM235) ipowder
I-N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) ipowder
I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder